के एउटा बिरालो पहेंलो तरल belches भने?
अक्सर पाल्तु जनावर मालिक एक निष्पक्ष चित्र हेर्न बाध्य छन्: बिरालो पहेंलो तरल burps। को पाठ्यक्रम, त्यसैले यसलाई हुन हुँदैन। कि उल्टी प्राय बाहिरबाट विस्तार त तथापि जीव "Barsika" प्रबन्ध गरिएको छ।
तपाईं आफ्नो बिल्ली पहेंलो तरल belches देख्न, तर तपाईं उहाँले उत्कृष्ट स्वास्थ्य छ दृढ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने - त्यसपछि उहाँले बस pereel कि शायद चिन्ह हो। vomitus को संरचना मा वर्तमान undigested कणहरु "Whiskas" (वा अन्य खाद्य) हुनेछ। केही अवस्थामा मा, moustached predator विशेष ट्रिगर को Gag सहज क्रिया, यसलाई मा संचित ऊन को पेट खाली गर्न।
तथापि, तपाईं आफ्नो बिरालो पहेंलो तरल belches याद गर्दा - यो घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य ध्यान आकर्षित गर्न "गम्भीर" एक चोटि।
रोगहरु को खतरनाक प्रकारका
यो bile लीक रूपमा उल्टी, एक सुन्तला रङ्ग छ सम्भव छ। यस्तो लक्षण राम्रो बिरालो बिरामी थिए र एक योग्य पशुचिकित्सा को सहायता आवश्यक भन्ने तथ्यलाई प्रतिबिम्बित हुन सक्छ। को उल्टी मा bile अर्थ राख्छ मात्र एउटा कुरा: आफ्नो पाल्तु जनावर जिगर वा पित्त थैली एक विकार छ। र विकृति कि मृत्यु परिणाम समेत अंतर रहन्थ्यो गर्न सकिन्छ।
कलेजो विफलता मा अक्सर रोगबाट अग्न्याशय, intestines, अन्तस्करणले, र अन्य अङ्गहरू गर्न जान्छ।
बिरालो पहेंलो तरल belches भने, त्यसपछि यो संभावना उहाँले hepatitis, जस्ता रोगहरु संग निदान थियो छ hepatic विफलता, lipidosis, र थप।
यस्तो घट्यो भोक, अनियन्त्रित उल्टी, छाडा मल रूपमा hepatitis निहित सुविधाहरू। पहेंलो, र मल - - बेरंग यसरी मूत्र गाढा रंग, श्लेम लाग्एको झिल्ली हुन्छ। कलेजो आकार वृद्धि छ, र शरीर को तापमान वृद्धि। यो विकृति परजीवी सूक्ष्मजीवहरु, लागूऔषधको लामो समयसम्म प्रयोग, खाना विषाक्तता बाँच्न क्षमता को परिणाम हुन सक्छ। तपाईं माथि लक्षण पालन, र आफ्नो बिरालो को पृष्ठभूमिमा पहेंलो belches भने - तुरुन्तै पशु चिकित्सा क्लिनिक सम्पर्क गर्नुहोस्।
आवेदन गर्नु अघि तपाईंले कसरी पशुचिकित्सा गर्न पशु मदत गर्न सक्छ?
को पाठ्यक्रम, तपाईं कुनै पनि मामला मा हो आत्म मा संलग्न हुँदैन - यी अवस्थामा, तपाईंले एक योग्य टेक्नीसियन मदत छ।
उहाँले औषधि तयारी को उपचार को लागि आवश्यक छैन मात्र लेख्न, तर पनि शक्ति बचत मोडमा संचालित एक समय को लागि आफ्नो जठरांत्रिय पर्चा आफ्नो पाल्तु जनावर लागि सबै भन्दा राम्रो आहार सुझाव दिन्छौं। डाक्टर जाँदै अघि, तपाईं उहाँलाई infusions जडीबुटी (chamomile, स्टेटजोन्स wort, जंगली गुलाब, marigold) को लागि तयार भने, पाल्तु जनावर दुःख कम गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि लागि तयार हुन
भन्यो बिरामी जटिल आकार लिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन, यो मामला मा बिरालो धेरै महिनाको लागि पहेंलो फोम belches। र पाल्तु जनावर मा एक उच्च शरीर को तापमान हुनेछ र त्यहाँ भोक को कमी हुनेछ। कलेजो विफलता पनि जो कोहीले प्रकुपित सक्छ।
जनावर जो, फेरि, धेरै महिना लाग्न सक्छ पीलिया, विकास हुन सक्छ।
तपाईँले याद रूपमा आफ्नो बिरालो पहेंलो तरल पदार्थ र श्लेम लाग्एको झिल्ली र sclera belches यसलाई तुरुन्तै शक्ति सिस्टम परिवर्तन, एक सुन्तला रङ्ग हासिल गरेको छ, र यो सल्लाह लागि डाक्टर सीधा जानुहोस् राम्रो छ।
यो एक पाल्तु जनावर cholecystitis को स्वास्थ्य धेरै खतरनाक हो - gallbladder को सुनिंनु।
यो रोग बारम्बार पखाला, जिगर मा ज्वरो र दुखाइ सँगसँगै छ। यस मामला मा पनि सकेसम्म चाँडो रूपमा डाक्टर मदत खोज्न। यसलाई सजिलै digestible खाना को आहार मा समावेश गर्न superfluous छैन, र कलेजो एउटा ताप प्याड लागू गर्न।
उचित पोषण - स्वास्थ्य गर्न प्रमुख
आफ्नो पाल्तु जनावर खनिज, भिटामिन, ट्रेस तत्व, प्रोटीन, बोसो र कार्बोहाइड्रेट मा धनी छ जो एक पूर्ण र सन्तुलित आहार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्।
यो सिस्टम घरमा आफैलाई द्वारा तयार व्यञ्जन संग समाप्त फिड आपूर्ति संयोजन गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
निवारक उपाय सजग हुनुपर्छ माथिको pathologies जोखिम कम गर्न। आवश्यकता नियमित विशेषज्ञहरु द्वारा सबै सिफारिस Vaccinations गर्छन, को डाक्टर आफ्नो पाल्तु जनावर देखाउन र पशु deworming जस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रिया बारे मा भूल छैन। विशेष ध्यान आफ्नो बिरालो खाद्य को प्रणाली भुक्तानी गर्नुपर्छ। बित्तिकै एक जुङ्गा predator बिरामी महसुस रूपमा - द्रुत डाक्टर यसलाई साथ चलाउन
पाल्तु जनावर मा Gag सहज क्रिया अक्सर पर्याप्त हुन्छ भने, र तपाईं यस तरिकामा उहाँले अल्छी हुन छैन, माथि ऊन देखि पेट सफा र उहाँलाई लागि विशेष पेस्ट प्राप्त गर्न प्रयास छ बिल्कुल पक्का छन्। यो मलको संग पशु देखि ऊन को कणहरु हटाउन मद्दत गर्नेछ।
पकेट कुकुर: नस्ल र विशेष हेरविचार। सानो खल्ती कुकुर के नस्ल छन्?
ड्याक्शन्ड वर्ण - एक selfless र मायालु!
तिनीहरूले के हुन् - Labradors? वर्ण, नस्ल मानक, प्रशिक्षण क्षमता गर्न
घाम दिन मिश्रको एल Palacio - आराम गर्न ठूलो स्थान
Cortisol वा तनाव हर्मोन
अभिनेत्री Ekaterina Malikova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला
एसडी कार्ड पुनर्स्थापना - कारणहरू र
बुल्गेरियन रिसोर्ट्स छुट्टीको लागि जाने धेरै राम्रो हो? यात्रा सुझाव
आत्महत्या टिप्पणी कर्ट कोबेन। कर्ट कोबेन को आत्महत्या टिप्पणी पाठ
एक चिन्ह भन्छन्? लेट पात गिरावट - यो चिसो गर्न
अन्टार्कटिक र आर्कटिक मरुभूमि: माटो विशेषताहरु र माटो को सुविधाहरू
पेट क्लेंसिंग घर
हिउँदमा स्ट्रबेरी कसरी स्थिर गर्ने
अनुहारको लागि सूरजमुखीको तेल: आवेदनको तरिका, उपयोगी गुणहरू र समीक्षाहरू